Posted by Rob Y. on January 10, 2016 · Shiya amazwana
With the usungula inthanethi, ukuthenga izimoto ezisetshenziswa kanye nazo zonke izinhlobo zezimoto isishintshe kakhulu. Abathengi enakho xaxa futhi unolwazi mayelana uthenga futhi yini okumelwe siyibheke. Ibhizinisi isishintshe kakhulu kule minyaka 40 iminyaka futhi ikakhulukazi saleli shumi lokugcina leminyaka. People can go online and look […]
Tags: ukuthenga izimoto ezisetshenziswa, internet
Posted by Rob Y. on May 6, 2014 · Shiya amazwana
Uma ukuthenga imoto eyisekeni ngaphezu ukwenza olunye uketshezi ukuthi siye basikisela ukuthi uhlole, nani kudingeka uhlole izimoto amabhuleki. Ukunqanda imoto kukhona into eyodwa zenzelwe ukugqoka out. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]
Posted by Rob Y. on May 1, 2014 · Shiya amazwana
In post wethu odlule sasiyihlanganisa amafutha crank icala engine, indlela ukuhlola nokuthi yini ukubheka for. In this post sizobe Cover kokuhlola transmission uketshezi yini ukubheka for. Eceleni amafutha engine, amafutha yokudlulisela cishe olandelayo uketshezi ebaluleke kakhulu. It is vital for automatic transmissions to have the […]
Tags: yokudlulisela ngibheka, ngibheka yokudlulisela uketshezi, imoto umbiko isimo
Posted by Rob Y. on April 26, 2014 · Shiya amazwana
Okuthenga imoto esetshenziswa kungaba umsebenzi onzima. Kukhona izinto ezimbalwa ungahlola ngokwakho ukuqinisekisa ukuthi uthola imoto enhle futhi quality enhle. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu okudingeka ukuba uhlole uma uthenga imoto esetshenziswa injini crank amafutha icala. In this post […]